AmaConifers ezisizungezile yonke indawo. Lezi izihlahla ezihlale ziluhlaza nezihlahla ukuheha nathi ngendlela ebukeka ngayo omangalisayo unyaka wonke. Batholakala emhlabeni wonke, yaveza hhayi kuphela ezindaweni ezishisayo, kodwa futhi ngalé kwe-Arctic Circle. Hlangana AmaConifers kungaba sezulu sethu. Omele edume kakhulu futhi ethandwa lolu hlobo izitshalo nemithi, yebo, kungumuthi. Minyaka yonke silindele wakhe ngonyaka omusha, senza isifiso kanye nethemba engcono.
Lezi zitshalo ababonakali ngezikhundla kalula kusuka nezinye izilwane ngenxa yokubakhona siluhlaza inaliti emise noma zibe maholoholo amahlamvu, okuyinto avamise ukubizwa ngokuthi izinaliti noma izinaliti. Ngaphezu kwalokho, izitshalo coniferous yakha izigaxa noma zokhuni amajikijolo. Ukuze lezihlahla AmaConifers nobuntu ushintsho ecacile bamahlamvu. Ngezikhathi, omunye zingabuka isithombe esilandelayo: amaqabunga emthini, ukulahlekelwa umbala oluhlaza, iwe. Bheka lokhu, ungathola larch. Nanguya omele abavelele babengasiqondi AmaConifers. Ngakho-ke, ngonyaka ewalahla kwamahlamvu endala.
Ngo AmaConifers siluhlaza inqubo esinjalo ningagcini. Kubo akuyona nobuntu ushintsho ecacile bamahlamvu. Nsuku zonke unyaka wonke, singakwazi sizigcine amahlamvu. Nokho, bona, kakhulu, ziyashintsha amaqabunga awo. Vele ukwenze kancane kancane phakathi nenkathi ethile ngokuphila kwakhe, futhi umuntu akusho ukuqaphela.
Lena impahla ehlukile AmaConifers baye bavumela ukuba abe omunye izenzakalo ezivelele ngokokuhlobisa ingaphakathi ngaphakathi eseduze ingxenye yendlu. Isikhathi esining impela, ukuze kwakhiwe ezizungezile zikaphayini, curbs kanye ezicijile usebenzisa fir esakaza, Isigaxa fir zikaphayini Fluffy. Lezi zitshalo iyisibusiso real landscape umklami. Phela, nabo basuke ingasetshenziswa ukwakha design eyingqayizivele ngempela sesayithi ngayinye, okuyinto futhi ubukeka nice and green unyaka wonke.
Kuyaphawuleka ukuthi laba AmaConifers Ornamental esingase sithinte umsebenzi ngenxa yobuhle. Bayayithanda kakhulu antiseptics zemvelo. Ngakho-ke, abantu abaningi abafuna okungenani kancane ukuthuthukisa imvelo at indawo yayo, lezi zitshalo zitshalwa, okukuvumela ekuhlanzeni umoya ukungcola uthuli amagesi ayingozi.
Ungase futhi wenze ikamelo AmaConifers uma uthanda. Zuza ukubukeka ezifanele njengeqembu kungaba kuhle esitolo okukhethekile. Lokho abayithandayo wena isikhathi eside, kufanele uhlinzeke nabo elilungile lokushisa kanye nomswakama Amazinga. Beka engcono wayo ngasenyakatho noma ngasenyakatho-mpumalanga iwindi. Ngesikhathi ukuthenga qiniseka Buza umdayisi ngalokhu, ngakho asikho ngephutha ubuhlungu isitshalo kuluthola. Ikakhulukazi, kubalulekile ukuba ucacise ukuvama ukuthambisa lincike sikhathi sonyaka. Kubalulekile ukuthi umhlabathi ungalahlekelwa ome futhi hhayi ngokweqile. Kulokhu, isitshalo sakho ngeke sijabulise isikhathi eside ukuhlanza emoyeni ekamelweni bese enika omningi imizwelo eyakhayo nawe.
Strausnik Fern - kwezinhlobo amahle kunayo uhlobo lwe
"I iWhite Guard" - isifinyezo kubafundi
Stunts ku skates Wabasaqalayo futhi ziyatholakala
Barkas - isikebhe
Ngomusa oyisizemazema isilwane - panther